Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 4
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 4)
HORDHAC: Levante Vs Barcelona iyo wax walba oo aad uga baahantahay kulankan.
Kooxda Barcelona ayaa laba kulan oo kaliya u jirta in ay guuldaro la,aan ku dhamaysato xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga Iyaga oo isku diyaarinaya in ay la ciyaaraan Levante. Kooxda Ernesto Valverde ayaa ku guulaystay horyaaalka La Liga markii ay 4/2 uga badisay kooxda Deportivo La Coruna dhamaadkii bishii April waxana ay rikoorkooda guuldaro la,aanta ah sii wadeen markii ay ...
Real Madrid Oo xasuuqday Celta Vigo iyo Gareth Bale oo bandhig wanaagsan sameeyay.
Real Madrid ayaa guul weyn ku macasalaamaysay garoonkeeda Estadio Santiago Bernabeu iyaga oo garaacay kooxda Celta Vigo kulan ka tirsanaa todobaadka 37-aad ee horyaalka La Liga. Los Blancos ayaa si dar-dar leh ku bilaabatay ciyaartay iyaga oo weeraro waali ah ku qaadayay kooxda martida u ah ee Celta Vigo. Real ayaan wakhti badan sugin in ay dhaliso goolka 1-aad iyaga ...
Lazio oo xiiseyneysa weeraryahan Arsenal ay leedahay.
Kooxda reer taliyaani ee Lazio ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso saxiixa weeraryahanka Arsenal Lucas Perez. Perez, oo Gunners uga soo biiray Deportivo La Coruna sannadkii 2016, ayaa ku guuldareystay inuu booska helo tababare Arsene Wenger, waxaana haatan uu amaah ugu maqan yahay kooxda. Si kastaba ha ahaatee, Coruna ayaa dhawaan ka laabatay horyaalka La Liga, waxaana la aaminsan yahay ...
Bayern Munich Oo Xaqiijisay In Ay Heshiisyo Cusub Ka Saxiixatay Arjen Robben & Rafinha.
Kooxda Bayern Munich ayaa si Rasmi ah u shaacisay in ay heshiisyo cusub ka saxiixatay laba xididg oo kooxdeeda u ciyaara kuwaas oo kala ah xiddiga garabka ka ciyaara ee Arjen Robben iyo daafaca reer Brazil ee Rafinha. Maamulka Bayern Munich ayaa dalab miiska u saaray xiddiga reer Holland ee Arjen Robben todobaadyo ka hor si uu kooxda ugu saxiixo ...
Liverpool oo qarka u saaran inay lasoo saxiixato daafac Barcelona keyd kaga jiro.
Kooxda Liverpool ayaa dooneysa inay amaah ku qaadato daafaca Barcelona Jerry Mina xilli ciyaareedka 2018-19. 23 jirkaan ayaa afar jeer loo isticmaalay tartamada oo dhan Ernesto Valverde tan iyo markii uu ka yimid Palmeiras bartamihii xilli ciyaareedkan. Valverde ayaa haatan rajeynaya in Mina uu u baahanyahay waayo aragnimo si uu u noqdo daafac buuxa ka soo baxdo sida laga soo ...
RASMI: Dani Alves oo seegaya Koobka Adduunka 2018-ka.
BRAZIL xiddiggeda Dani Alves ayaa la shaaciyay in uu seegayo koobka Adduunka ee ka dhacaya Sanadkan Dalka Ruushka, sida ay sheegayaan wararka laga helayo Qaranka Koofurta Ameerika ka dhisan. Difaaca midig ee rug caddaaga ah, waa 35-jir, wuxuu ka dhaawacmay Jilibka Midig intii lagu jiray kulankii ay guusha PSG ka gaartay naadiga Les Herbiers ciyaar ka tirsan French Cup. Hadda ...
Klose oo tababare ka noqday koox uu horay usoo maray.
Xiddiggii hore ee Kooxda Bayern Munich Miroslav Klose, ayaa dib ugu laabtay Kooxdiisii hore halkaas oo uu ka helay jago dhinaca maamulka kooxda ah. Miroslav Klose,waxaa ay Bayern u magacowday in uu noqdo tababaraha da’yarta 17 jirrada Bayern,isaga oo xirfadda tababarenimada halkaas ka billaabaya. Agaasimaha dhimaca ciyaaraha Kooxda Bayern Hasan Salihamidzic,ayaa sheegay in iyaga oo dib u eegaya ciyaartooydii ugu wanaagsanaa kooxda ...
Juventus oo garaacday Milan kuna guuleysatay Coppa Italia.
Kooxda Kubadda Cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa markii 4aad oo xiriir ah xalay hanatay Koobka lagu magacaabo Coppa Italia kaddib markii ay garaacday AC milan. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-0,taas oo ka dhigay in AC Milan si fiican loogu sheegay in laga awood badan yahay,waxaana sidaas ku dabaaldegtay Kooxda Kubadda Cagta ee Juventus. Juve waxaa ay sidoo kale isu ...
Chelsea oo taako loo dhigay lana soo afjaray rajadii ay ka la heyd usoo bixitaanka UCL.
Kooxaha Kubadda Cagta ee Chelsea iyo Huddersfield Town ayaa waxaa dhexmaray kulan labada kooxoodba muhiim u ahaa,waxaase ay ku kala tageen natiijo ay dhibcaha qeybsadeen. Natiijadaas waxaa ay guul uga dhigneyd Huddersfield laakiin waxaa ay guul darro iyo niyad jab u ahayd Chelsea,maaddaama aysan sanadka dambe ka qeybgeleyn tartanka Champions League ee Qaaradda Europe. Kooxda Huddersfield Town waxa ay u baahneyd bar barrahaas ...
Asrenal oo dhagta dhiiga loo daray rikoor xunna ka heysato markeey bannaanka kusoo ciyaareyso.
Kooxda kubadda Cagta ee Arsenal ayaa dhigtay rikoorkii ugu liitay intii uu maamulayay Tababare Arsen Wenger kaddib markii 7 kulan uu isku xigta oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan Garoonkeeda aanay xitaa bar barro ka helin. Ciyaartii xalay dhexmartay Arsenal iyo Leicester City ee ka dhacday King Power waxaa awood badisay Leicester oo garaacay Arsenal. 3-1 ayaa looga badiyay ...
Man City oo badisay rikoorna ka dhigtay horyaalka ingriska.
Kooxda Kubadda Cagta Man City ayaa dhigtay rikoor dhinaca gool dhalinta ah kaddib markii ay xalay dhaliyeen goolkii 105aad ee xagaagan. Manchester City waxaa 3-1 uga badisay Kooxda Brighton, waxaana goolasha u kala dhaliyay Danilo, Bernardo Silva iyo Fernandinho. Waxaa kale oo ay dhibco ahaan gaartay 97 dhibcood iyo 31 kulan ooh al xilli ciyaareed ay guuleysatay ama aan laga ...
Barcelona oo xasuuqday Villarreal walina dhinaceeda dhulka la dhigi la’yahay.
Kooxda kubadda Cagta Barcelona ee dalka Spain ayaan dhinaceeda dhulka la dhigin kulankii 43aad oo xiriir ah ee tartanka Laliga. Xalay waxaa ay 5-1 ku dar dareen Kooxda VILLARREAL ee Laliga Dalka Spain ka ciyaarta,waxaana goolashaas kala dhaliyay Coutinho, Dempele oo labada dhaliyay,Messi iyo Poulinho. Barcelona ayaa waxaa ay dadaal ugu jirtaa in labada kulan ee uga dhiman horyaalka aan ...